Warbixinta isbadalka cimilada - BBC News Somali
Warbixinta isbadalka cimilada
2 Nofembar 2014
Image caption Gaaska karbonka ee hawada galaya ayaa ka dhasha warshadaha iyo baabuurta.
Isticmaalka aan xadidnayn ee shidaalka aan nadiifka ahayn waa in la joojiyo si dhaqso ah si looga hortago isbadal cimilo oo qatar ah.
Warbixin cusub ee isbadalka cimilada oo ay soo saartay kooxda IPCC ee Qaramada Midoobay ay taageerto ayaa sheegtay fariintan.
IPCC ayaa ku dooday in marka la gaaro 2050 in inta badan korontada laga isticmaalo adduunka in laga dhalin karo hab karbon yar leh.
Shidaalka patroolka, gaaska, dhuxusha ee aan lahayn teknolojiyada lagu kaydiyo karbonka (Carbone cupture storage oo loo soo gaabiyo CCS) waa in la joojiyaa dhamaantiis markii la gaaro 2100 ayay sheegtay warbixinta.
Warbixinta ayaa lagu soo saaray magaalada Copenhagen, ee Denmark, kadib toddobaad markii ay ka doodayeen saynisyahanada iyo masuuliyiin ka socda dowladaha.
Warbixinta ayaa sheegaysa in adduunka ay ku soo socoto saamayn aan waxba laga qaban karin oo qatar ah hadaan wax laga qaban karbonka.
Sida korontada loo dhaliyo, waa in laga tagaa isticmaalka dhuxusha laga dhaliyo korontada oo loo gudbaa siyaabaha kale ee karbonka uu ku yar yahay sida Nukliyeerlka iyo tamarta nadiifka.
Warbixinta ayaa ku talinaysa in tamarta nadiifka ah ay ka kororto 30% oo hadda ay tahay oo ay gaarto 80% markii la gaaro sanadka 2050.
Image caption Wadahadalka isbadalka cimilada.
Waqtiga fog warbixinta ayaa sheegatay "saldhigyada korontada ee ku shaqeeeya patroolka, gaaska iyo dhuxusha ee aan lahayn teknolajiyada CCS ee kaydisa karbonka, waa in la joojiyaa sanadka 2100".
Siyaasiyiinta waxay ku heshiiyeen in kororka 2C ay tahay heerka ugu sareeya qatarta. Warbixinta IPCC ayaa faahfaahisay siyaabo badan oo lagu hayn karo kororka 2C heerkaas marka la gaaro dhamaadka qarniga.
Waddamada waxay u baahan yihiin inay si dhaqso ah ay u hirgaliyaan, laakiin ku dhawaad waxaa loo arkaa in karbonka hawada galaya la joojiyo sanadka 2100.
"Ma awoodno inaan sii wadno isticmaalka shidaalka saliida, gaaska iyo dhuxusha iyadoo aan laga qaban wasaqda ka dhalata sida CO2 iyo iyadoon hawada aan lagu sii dayn," ayuu sheegay Prof Myles Allen oo wax ka dhiga Jaamacada Oxford, kana mid ah kooxda IPCC ee wax ka qoray warbixinta.
"Hadii aanan la heli karin teknolajiyada karbonka kaydisa ( CCS - carbon cupture storage) oo ka hortagta in hawada uu galo waa inaan joojinaa isticmaalka shidaalka saliida,gaaska iyo dhuxusha hadaan doonayno inaan joojino isbadalka cimilada ee qatarta ah, taasina waa fariin cad oo ka imaanaysa warbixinta IPCC."
Hadalka cad ee mustaqbalka shidaalka saliida, gaadka iyo dhuxusha ayaa waxaa soo dhaweeyay dadka ololeeya.
"Waxaa la sheegay waa inaan gaarno in joojiyo karbonka hawada galaya, taasna waa wax cusub", ayay sheegtay Samantha Smith oo ka socota WWF.
"Mida labaad oo ay sheegeen waa la awoodaa oo dhaqaalaha wax uma dhimayso."